हप्तामा कति पटक यौन सम्बन्ध राख्दा राम्रो हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस – SajhaPana
हप्तामा कति पटक यौन सम्बन्ध राख्दा राम्रो हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस
साझा पाना २०७६ साउन १६ गते १२:०६ मा प्रकाशित
यौन सम्पर्क गर्नुको एक होइन अनेक फाइदा छन्। शरीरका लागि मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि पनि सेक्स निकै लाभदायीमानिन्छ। नियमित सेक्स गरिरहनाले विभिन्न रोगबाट जोगिन मद्दत हुन्छ। त्यतिमात्र होइन विभिन्न अध्ययनका अनुसार नियमित यौन सम्पर्क गर्नाले स्तन र प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्छ। साथै यौन सम्पर्कले मुटु बलियो हुने र तनावको खतरालाई पनि कम गर्छ।
के यो तथ्यांक गलत हो ? बिलकुलै होइन। सेक्स कति पटक गरिदैछ, यसले त्यो बेला सम्म फरक पर्दैन जब सम्म तपाईं र तपाईंको पार्टनर यसले सन्तुष्ट हुन्छन्। अध्ययनकर्ताका अनुसार हप्तामा एक पटक यौन सम्पर्क गरेर खुशी रहन सकिन्छ।
एक्सपेरिमेन्ट गरिरहनु पर्छ ?
उसो त हफ्तामा कतिपटक यौन सम्पर्क गर्नाले सम्बन्धमा सन्तुष्टि र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले ठीक मानिन्छ भने हफ्तामा एक पटक भन्दा धेरै सेक्स गर्नाले त्यति धेरै खुशी नमिल्न नि सक्छ जति एक पटकको यौन सम्पर्कले दिन्छ। यदि तपाईं धेरैपटक यौन सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्रेशनेसका लागि तरिकामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र नयाँ एक्सपेरिमेन्टहरु गरिरहनुपर्छ।
ट्याग : #यौन सम्बन्ध
सेक्स पावर बढाउन यी कुरा खानुहोस्